Tailengtai တိုင်းလှိုင်တိုင်း: October 2010
...ကိုစိုင်း..ကျမသွားတော့မယ်နော်.....လာမယ့်လမှကျမပြန်လာမယ်..ဟုတ်ကဲ့..ညီမလေး........သွားတော့မယ်နော်ကိုစိုင်း ဆိုတဲ့နုတ်ဆက်သံလေး..ကြားရတဲ့အချိန် ရင်ထဲမှာ
အလိုလိုနေရင်း..သူမ.ပြန်မလာမှာကို စိုးရိမ်နေမိသည်....သံယောဇဉ်ဆိုတာဒါများလား?.... ကိုယ့်ဟာကိုယ် စဉ်းစားလို့မရ.. ညီမလေး အမြန်ပြန်လာခဲ့နော်..ကျနော်ရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေလည်းဆွံ့အနေသည်
စကားလုံးတွေကရင်ထဲမှာ..ဘူတာမှရထားထွက်သွားတော့လည်း နှုတ်မှပြောမထွက်...သူမပြန်မလာမခြင်း မျှော်နေရသည်က ကိုစိုင်း.......အချစ်ဆိုတာဒါများလား?..........
A.x x..xကမ္ဘာပေါ်မှလူတွေစုပြီး..နေတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့တွင်..မြန်မာပြည်ကတိုင်းရင်းသား စုပြီးနေသော ချစ်စရာအိမ်လေးတအိမ် ရှိလေသည်။ ထိုအိမ်တွင်ကျောင်းဗီဇာနဲ့ ကျောင်းလာတက်တဲ့သူ
...x..ထိုရပ်ကွက်တွင် အခြားအိမ်များအားလုံး ဆေးဖြူသုပ်ထားပြီး ထိုမြန်မာမိ့သားစု့ နေသောအိမ်သည် .. ...အိမ်ရှေ့ ကားဆင်ဝင် တိုင်များနှင့် မုတ်များ ထူးထူးခြားခြား ဆေးမည်းသုပ်လိမ်းထား
သည် အိမ်လုံးကိုတော့ဆေးဖြူသုပ်လိမ်းထားပြီး တမူထူးခြားနေလေတော့သည်။.....
အမေရိကကို အခြေချဖို့ပြောင်းလာစ သူတို့သည် ငွေကလည်း သူများလို များများမရှိ အိမ်တွေ ကားတွေလည်း မဝယ်နိုင်သေး ဒါကြောင့်မို့ ချစ်ချစ်ခင်ခင် မိသားစုသဖွယ် ငှားရမ်းနေထိုင်
ကြသည်။ ...သူတို့ အတူနေထိုင် ကြသူထဲတွင် (ဆလိုင်းမောင်ကျော်သူ)သူကတော့ "2"နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်။..
("ပိုး".. ဆိုသောကောင်မလေး)ကတော့ "8" လရှိပြီဖြစ်သည်။....("မောင်မဲ"ဆိုသောကိုဘာပူ) ကတော့
"3"လရှိ့ပြီဖြစ်ပြီး...("စိုင်းဆိုးပေ"သည် အခုမှရောက်စ တစ်လဘဲ ရှိသေးသည်။)...
..x..x..x.....သူတို့အိမ်မှာရှိသော "ပိုး "ဆိုသော ကောင်မလေးသည်..ကိုယ်လုံးအရပ် အနိမ့်အမြင့် အချိုးအဆစ် .ပြေပြစ်ပြီး ဆံပင်ရှည်ရှည် နာတံစင်းစင်းလေးနဲ့ ချောမောသောအလှပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။.....ပိုးစုန်းကြူးလေးလို....လှချင်တိုင်း လှနေတော့သည်...
B..x...x...x...x...x...မိုးကောင်းကင်တစ်ခုလုံး တိမ်ညိုတိမ်မည်းတွေနှင့်ဖုန်းလွှမ်းထားပြီး မဲမှောင်နေသည်....x...x..x.........မကြာခင်ရွာတော့မည့်မိုး....
လူမဲတယောက် အိတ်မဲကိုဆွဲပြီး သုတ်သီးသုတ်ပျာနဲ့ အလောတကော အိမ်မဲပေါ်သို့ တက်သွားတော့သည်။....အိမ်ပေါ်သို့မြန်မြန်တက်သွားသည်က အခြားမဟုတ် ရေမိုးချိုးပြီးရင်.. အေးအေး ဆေးဆေး...
အရက်သောက်မယ်ပေါ့။.....သူသောက်နေကျနေရာ...ဧဉ့်ခန်းဆိုဖာပေါ်TVကြည့်ရင်းနဲ့...ဒီနေ့မှာတော့ အိမ်ထဲမှာ အရမ်းပူနေသည် အပြင်ဝရံတာထွက်ပြီး ဆေးလိပ်သောက်ရင်း လေအေး ခံလိုက်အုံးမှ.....
..x...x..xသူအပြင်ထွက်သွားသည်အခိုက်... x..x..ဆလှိုင်းကျော်သူ တယောက် တံခါးတွေအကုန်လောက်ချပြီးအလုပ်သွားလိုက်တော့သည်။.....လူမည်းတယောက် အရက်သောက်ရန်အထဲဝင်ဖို့ တံခါး
x..x..x စိတ်ညစ်ညစ်နှင့်အိမ်ရှေ့ကားဆင်ဝင်အောက်တွင်ဆင်းထိုင်နေလိုက်သည်....သိပ်မကြာလိုက်..လေရောမိုးပါ..ဗုံမဆင့်ဆိုင်းမဆင့် ချက်ချင်းကြီးရွာချလိုက်သည်..မောင်မဲတစ်ယာက်တစ်ကိုယ်လုံး
...ဟိုဖက်အိမ်က ဗွီယက်နမ်တွေလက်သမားလုပ်ပြီးအလုပ်ကအပြန် အိတ်မဲကိုဆွဲးပြီး ကားပေါ်ကအဆင်း မောင်မဲကိုတွေ့သွားသည်။....ဟ..ကိုမဲမိုးရေတွေလည်းရွှဲးလို့အိမ်ထဲဝင်လိုမရဘူးထင်တယ်။
.. ..လာ.....ကျနော်တို့အိမ်...ကိုမည်းတယောက်..ကြက်ကန်းဆန်အိုးတိုးသလို..ဖွီယနမ်ရဲ့အဝတ်တွေလှဲပြီး...ညည့်နက်သည်ထိ.. ဗွီယနမ်တွေဆွဲလာသောအိတ်မဲထဲကအရက်တွေ
....တစ်နာရီလောက်ရှိပြီထင်သည်......ဒီအခိုက်...x..x,..ဖြုတ်..ဖလုတ်.အသံကြားရာလည့်ကြည်းလိုက်တော့ .... ဗွီယိုပေါ်ကဘက်အိတ်လိမ့်ကျလာတာတွေ့ရသည်..လူတယောက်မှမရှိ့... ဟ...သရဲခြောက်တာလား..အိပ်ခန်းတံခါးဖွင့်ပြီး.. ဧည့်ခန်း မီးဖိုဆောင် တခြားအခန်းတွေအကုန်ဖွင့်ပြီး ကြည့်တော့လည်းဘာဆိုဘာမှမတွေ့
....ဧကန်ဒတော့သရဲဘဲဖြစ်ရမယ်.....ဟိုနေ့ကလည်းလူမဖွင့်ဘဲ ကက်ဆက်ကသူ့ဟာသူအသံမည်....မီးဖိုချောင်မှာထမင်းချက်နေတုန်း ဧည့််ခန်းထဲမှာ လူမဲလိုလို ရိတ်ခနဲမြင်ရပြန်...ဘာမှလုပ်စရာမရှိတော့ပြီ....ကြက်သီးမွေးညှင်းတွေလည်းဖျန်းခနဲးထ..
ခေါင်းကဆံပင်တွေလည်း ထောင်တက်ပြီး တကိုယ်လုံးစိမ့်ခနဲး..အမျှ၃ခေါက်ပေးဝေပြီး..အခန်းထည်းပြန်ဝင်နေလိုက်သည်။.......
.... "ဘိုဘို "ဆိုသောအစ်ကိုတစ်ယောက် ကျနော်တို့အိမ်အလည်လာသောအချိန်.. အိမ်မှာသရဲ ရှိတဲ့အကြောင်း နှစ်ကြာပြီဖြစ်တဲ့ "ဘိုဘို"ကိုကျနော်မေးကြည့်တော့ ဟုတ်မယ်ကိုစိုင်း အရင်က အာရှသားတွေမရှိဘူးတဲ့ အမေရိကန် ဗွီယနန် စစ်ဖြစ်တော့ အမေရိကန်ဖက်ပါတဲ့ ဗွီယနန်တွေ အာရှသားတွေ အများကြီးရောက်စ အချိန်ပေါ့ ...လူမဲတွေကနယ်ခံဆိုတော့ အနိုင်ကျင့်တာ မိန်းကလေးတွေကို အားဓမ္မပြုကျင့် အာရှသားဗွီယက်နန်တွေကို သတ်တာတွေ တော်တော်များတယ်တဲ့ နောက်ပိုင်း ဗွီယက်နန်တွေလည်း မခံတော့ဘူး ဗုံးတွေလုပ်ပြီး လူမဲစု နေတဲ့နေရာ လူမဲအိမ် လူမဲတွေ အုပ်လိုက်ကားစီးလာတဲ့အချိန် အဲ့ဒီကားတွေ အိမ်တွေ ဗုံးခွဲးလိုက်တယ်တဲ့ ကိုစိုင်း...
......နောက်ပိုင်းတော့ ဗွီယက်နန်တွေ အာရှသားတွေကို လူမဲတွေက မလုပ်ရဲတော့ဘူးတဲ့.... သူတို့ပြောပြချက်အရဆိုရင် တစ်ပတ်တစ်ခါ အမှိုက်ကားလာပြီဆိုရင် အိမ်ရှေ့ အမှိုက်ပုံးထဲမှာ အလောင်းတွေ ပိုင်းပြီးထည့်ထားတာ ခဏ ခဏ တွေ့ရတယ်လို့ပြောတယ် ကိုစိုင်းပြောတဲ့ သရဲဆိုတာဟုတ်မယ်....ကျေးဇူးပဲ ကိုဘိုဘို ခင်များပြောပြတဲ့အတွက် အကြောင်းစုံသိရတာ.... ကိုစိုင်းကျနော်ပြန်လိုက်အုန်းမယ်နော် နောက်နေ့ ကိုစိုင်းကိုကျနော့်အိမ် အလည်သွားဖို့လာခေါ်မယ်.>
.....လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လက ဟိုမဟာပြည်နယ်ကနေ ကျနော်တို့နေတဲ့ ပြည်နယ်ကို အလည်လာတဲ့
ကရင် အစ်မတစ်ယောက်...ကျနော့်ဆီ ဖုန်းဆက်လာသည်... ကိုစိုင်း ကျမတို့ အလည်လာမယ် လိပ်စာပေးဆိုလို့ ကျနော်လိပ်စာပေးလိုက်တော့ မလာဘူး။... တစ်ပတ်လောက်နေပြီး ကရင်အမကျနော့်ဆီ ဖုန်းပြန်ဆက်လာသည်.... ကိုစိုင်း ကျမပြန်တော့မယ်နော် ဆိုတော့..
..ဟား..အစ်မအလည်လာမယ်ဆို...ကျမ မောင်လေးတွေက ကိုစိုင်းတို့နေတဲ့ရပ်ကွက်ကို မလာတတ်ဘူးတဲ့ ...ဟ..အစ်မလုပ်ပြန်ပြီ မလာတတ်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး..
အစ်မကြောက်လို့မဟုတ်လားဆိုတော့. .ဟဲ..ဟဲ..ဟုတ်တယ် ကိုစိုင်းတို့နေတဲ့ရပ်ကွက်က နာမည်ကြီးတဲ့ ဒါကြောင်မို့သူတို့ မပို့ရဲတာ အခုဘာမှမရှိပါဘူး..အမရယ်။ အရင်တုန်းကပါ...အစ်မ မလာရဲရင် ကျနော်အစ်မတို့ ဆီလာလို့ရပါတယ်။...
ကျမပြန်လိုက်အုံးမယ် နှောက်တစ်ခေါက်မှ တွေ့ကြတာပေါ့နော် ကိုစိုင်း.... ကျနော်နေသောရပ်ကွက်သည် တော်ရုံလူမလာရဲ ကျနော်တို့အိမ် သရဲ တော့တကယ်ရှိမည်ထင်သည်။.....
(အပိုင်း၃)...x...x...x.......အချိန်ကည .12း၀၀ ရီ.....
"ဘာဘူ" ဆိုသော ငမဲတယောက် မူးနေပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း ဟန်ချက်မထိမ်းနိုင်တော့ ဗွီယက်နန်အိမ်သားတွေလည်း အိပ်ဖို့ဟန်ပြင်နေတော့ မပြန်လို့မဖြစ်...... အိမ်ပြန်လာပြီး အိမ်ပေါ်တံခါးဝ ဖိနပ်ချွတ်တဲ့နေရာမှာထိုင်ရင်းမူးမူးနဲ့ဘယ်အချိန်အိပ်ပျော်သွားမှန်းမသိ.......ညတစ်နာရီလောက်(ဆလှိုင်းကျော်သူ)တယောက်အလုပ်မှပြန်လာတော့ အိမ်ပေါ်တက်တက်ချင်း......တံခါးဝမှာထိုင်လျှက်သား အိပ်ပျော်နေသောကိုမဲကို သူတွေလိုက်သည်။...
..x..xx ဖိနပ်ချွတ်တဲ့နေရာ လာအိပ်နေတယ်...ထ.ထ...ထ.. ကိုမဲ မူးမူးနဲ့ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့.
.တခါးပိတ်သွားတဲ့ကောင်.. ...ဟေ့ကောင် ငါအိပ်ချင်လို့အိပ်တာ မဟုတ်ဘူးကွ....မင်းလုပ်သွားလို့ငါအထဲဝင်လို့မရတာ...x.. ..xသိရဲ့သားနဲ့ တမင်သက်သက်လုပ်တာ.....ငါ့....(xxxxx)တဲကောင်...ဆဲဆိုသံတွေလည်းဆူညံလို့.............
.."ဆလှိုင်းကျော်သူ"... ဟ.....ကိုကြီး ခင်များအပြင်မှာနေတာ ကျနော်မသိလိုက်ဘူး...ဘယ်သူမှ မရှိဘူးထင်လို့ပိတ်လိုက်တာပါ။... ..
ငါအပြင်မှာနေတာသိရက်သားနဲ့ တမင်သက်သက်လုပ်တာကွ.."ကျော်သူ". ကျနော်သိရင်လုပ်ပါ့မလား မသိလို့.. .တယောက်တခွန်း..ရိုက်ကြတော့မည်ဖြစ်သည်။
....ကိုစိုင်းတယောက် အခန်းထည်းကထွက်လာပြီး ဝင်ပြောလိုက်သည်။.. ဟား...ညီလေးနဲ့အကိုကြီး..မလုပ်ကြနဲ့..မူးနေသော ကိုမဲကို...ဝင်ဆွဲပြီး လာ..လာ ကိုကြီး ခင်များ မှန်တယ်။ ..အေ့..မင်းမဆိုးဘူးညီလေး ဟိုကောင်တမင်သက်သက်လုပ်တာ.... စိတ်လျှော့အစ်ကိုကြီး ဘုရားဆုတောင်းပြီး အိပ်နော်....
"ကိုစိုင်း" အပြင်မှာရှိနေသော "ဆလှိုင်းကျော်သူ"အား..လာ.. စိတ်လျှော့လိုက်ညီလေး သူကမူးနေတဲ့လူ....ဟုတ်ကဲ့ပါအစ်ကို....ညီလေးရေ အလုပ်လည်းပန်းလာပြီ...ရေမိုးချိုး စားသောက် ပြီးရင်...မအိပ်ခင်
......အရက်သည် သောက်ပြီးရင်မူးဖို့ သစ္စာရှိ့သလို မူးပြီးရင်ရန်ဖြစ်ဖို့လည်းဝန်မလေးတတ် အရက်ကြောင့်ပျော်ရွှင်စရာ အိမ်လေးသည်လည်း တယောက်နှင့်တယောက် အခေါ်အပြောမလုပ်ကြတော့...
. အချိန်ကည .၁၁းနာရီအချိန်..ကိုမဲဆီ..ဖုန်းဝင်လာသည်..."ကိုဘာဘူ" မနက်ဖြန်ညနေပိုင်းပွဲရှိတယ်သွား ရအောင်... အေ့ သွားမယ်လေ ခင်များတို့ဆီကျနော်လာခဲ့မယ် အတူတူသွားရအောင်.. ကိုမဲဖုန်းချလိုက်သည်။ ပြီး တော့ "ကိုစိုင်း"ကိုလှမ်းပြောလိုက်သည်... ...ဟေ့...ကိုစိုင်း မနက်ြဖန်ပွဲလိုက်မလား? ....ခေါ်ရင်လိုက်မှာပေါ့။.......အတွေးတွေနဲ့အိပ်ပျော်သွားတော့သည်။...
..xx...x.xx......"ကိုစိုင်း"နဲ့ "ဆလှိုင်ကျော်သူ" သူတို့နှစ်ယောက် ဘူတာမှဆင်းဆင်းချင်း သုတ်တီးသုတ်ပျာနှင့် "ကျော်သူ" အရှေ့ကသွားနှင့်ပြီး ကိုစိုင်းအနောက်ကမလမ်းမကမ်းလိုက်သည်။... ပန်းခြံရှေ့ကဖြတ်အကူး ..x..x. ဟေ့.. ကိုစိုင်း လှည့်ကြည့်တော့ဘာမှမတွေ့....သွားဖို့ခြေတစ်လမ်း လှမ်းတဲ့အချိန်....X...x...နင့်သူငယ်ချင်းကောတဲ့..အသံကြားရာလှည့်ကြည့်တော့ ရောင်စုံနှင်းဆီပန်းတွေဝေလို့...ကိုမဲလား? ကျနော်မေးတော့ ဟုတ်ဘူး ကောင်မလေးချောချောလေးကိုပြောတာတဲ့..အသံတော့ကြားနေရသည်လူတစ်ယောက်မှကျနော်မတွေ့.... ရောင်စုံနှင်းဆီပန်းလေးတွေ လေမတိုက်ဘဲ တခင်းလုံးရိမ်း"က"နေတာ ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ့လိုက်ရသည်။.....
....ကောင်မလေး... ချောချောလေးကိုပေးဖို့ အလှဆုံးနှင်းဆီပန်းဖြူဖြူကြီးတစ်ပွင့်ခူးဖို့လက်တစ်ကမ်းတွင်. X..X...ကိုစိုင်း..ကိုစိုင်း ..ထ.ထ... ထတော့ 7း နှစ်နာရီထိုးပြီ 8း နာရီကျောင်းသွားရမှာ..ကျော်သူ ကျနော့်ကို
...နေ့လည်ဆက်နှာရီကျော်လောက် ကျောင်းမှအပြန် အိပ်မက်ခဲ့သောပန်းခြံတွင် "အလှပဆုံးနှင်းဆီပန်ကြီးတပွင့်" ကျနော်ခူးယူပြီး..."ပိုး"...ဆိုသောကောင်မလေး ပြန်လာရင်ပေးဖို့ရေခဲသေတ္တာထည်းထည်သိမ်းထားလိုက်သည်။.......
လဆန်းနှစ်ရက်.... ကိုမဲတစ်ယောက် တစ်ခြားရပ်ကွက် သူ့အမျိုးတွေဆီ ပြောင်းသွားတော့သည်။......ကိုမဲပြောင်းသွားပြီး နောက်တစ်ရက်တွင်.
..."ပိုး"... တစ်ယောက် တက်ကဆက်ပြည်နယ် အမျိုးတွေဆီမှ အိမ်ပြန်လာသည်။.... ဟား.. ညီမလေး ပြန်လာပြီ...ဟုတ်တယ်ကိုစိုင်း ကိုစိုင်းအတွက် ကျမလက်ဆောင်ပါလာတယ်။ ကောင်မလေးသူ့အခန်းထည်း
......... ကိုစိုင်းတစ်ယောက် ကောင်မလေးကို နှင်းဆီပန်းပေးဖို့ .....
...နှင်းဆီပန်းမရှိတော့ ....x...x...x....x...ဒါ..ကိုမဲ လက်ချက်ဘဲဖြစ်ရမယ် ချက်ချင်းဆိုသလို..ကိုမဲကို ဖုန်းကောက်ဆက်လိုက်သည်။....ဟလို..ကိုမဲ ရေခဲ
သေတ္တာထဲက နှင်းဆီပန်း ခင်များယူသွားတယ်မဟုတ်လား....X...X....အ..အ.အ..ဟုတ် ဟုတ်တယ်ညီလေး ကျနော်ကိုခွင့်လွတ်ပါ..
ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကို ပေးလိုက်တာ အခုကျနော်တို့ အဆင်ပြေနေကြပြီ .....ကျနော် ကိုစိုင်းကို တောင်းပန်ပါတယ်။......
...ခင်များဗျာ ကြံကြံဖန်ဖန် ကျနော့် နှင်းဆီပန်းကိုမှယူသွားရတယ်လို့ ကိုမဲရယ်....
..ကျမပြန်လာကထည်းက အခန်းထဲက ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့ တချက်လေးမှအငြိမ်မနေဘူး ဘာဖြစ်နေတာလည်း .....ရော့.....ကျမအနွေးထည်ဝယ်လာတယ် ကိုစိုင်းဝတ်ဖို့်......
......ရေခဲသေတ္တာထဲက နှင်းဆီပန်း ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပေမဲ့ ကျနော့်ရင်ထဲက ဖြူစင်တဲ့အချစ်တွေ ပျောက်ဆုံးနိုင်မှာမဟုတ်..ကျနော်တကယ်ပေးချင်တာ ရင်ထဲကအချစ်။...ရင်ထဲကအဖြူရောင်နှင်းဆီပန်းတစ်ပွင့်.....ဒါပေမဲ့ သူနဲ့တွေ့တဲ့အချိန် ကျနော့် နှုတ်တွေ "ဆွံ့အ" နေသည်။.. သူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကား.....
..ကျနော်ပြောလို့မထွက်...".ပိုး"လက်ထည်းက အနွေးထည်ယူပြီး ကျနော့်အခန်းထည်းကို.... ကျနော်...... ပြန်ဝင်လိုက်လေတော့သည်။....
Posted by tailengtai တိုင်းလှိုင်တိုင်း at 1:40 PM 1 comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest